organique gluten maimaim-poana tsaramaso mainty fohy paty(3.7mm) - China organika gluten maimaim-poana tsaramaso maintyMGohy paty(3.7mm) mpamatsy,Factory -Qianna
Ny tena ilaina ny tsaramaso mainty dia mainty paty fohy tsaramaso , izay manana tombontsoa ara-pahasalamana maro.
1. Black tsaramaso dia mety hanampy kokoa ny système digestif.
Ny tsaramaso mainty dia feno fibre. Fibre mety hanampy fisorohana ny fitohanana, iray mahatonga ny tsinay mora kokoa ny mitantana ny hetsika.
2. Black tsaramaso dia afaka manampy olona voan'ny diabeta foana ny ra siramamy haavon'ny.
Ny afa-po ny fibre avo sy ny fandevonan-kanina ihany koa ny manakana miovaova spikes sy nianjera siramamy ao amin'ny ra haavon'ny. Miovaova siramamy haavon'ny Mety mahafaty ny diabetics.
3. Black tsaramaso misy Mahasalama kokoa noho ny olona iray dia afaka mieritreritra.
Ny tsaramaso mainty misy asa antioxidant kokoa noho ny hafa tsaramaso. A fianarana, nivoaka tao amin'ny Gazety Momba ny Fambolena sy ny sakafo Simia amin'ny 2003, nanambara fa tsaramaso miaraka amin'ny voa akanjo mainty voarakitra more flavonoids. Flavonoids dia loko-phytonutrient famokarana loko izay miasa toy ny Mahasalama eo amin'ny tena hiadiana amin'ny aretina sy ny afaka mitovy hevitra. Phytonutrients no fototra Kamban-teny, bebe kokoa ny fototra tompon'andraikitra ny loko noho ny hafa, manampy ny zavamaniry ny fahaizana ho tafita velona amin'ny taratra UV sy ny aretina.
4. Black tsaramaso Afaka manampy anao mijanona mijery tanora.
Mahasalama toy ny anthocyanins tsy miady fotsiny aretina. Black tsaramaso ahitana ny hery anaty mba hisorohana ny fahanterana aloha loatra vokatry ny masoandro overexposure.
5. Black tsaramaso dia afaka manampy ny olona detoxify.
Misy asidra Sulfites dia Kamban-teny hita ao amin'ny divay, voankazo maina, ary ny sasany legioma, izay mety hiteraka vokany, toy ny aretin'andoha sy very hevitra avy. Hita tamin'ny fanadihadiana natao fa tsaramaso mainty no tena ambony amin'ny molybdène, mineraly tsy fahita firy matetika hita ao amin'ny sakafo. Zavatra tsy handresena ireo mineraly levitra.
6. Black tsaramaso atao koa ny hampitombo ny rafi-pitatitra.
Black tsaramaso ny atidoha ihany koa ny manome ny ilaina asidra amine, vitaminina, ary ny mineraly. Misy otrikaina, anisan'izany ny vitaminina sy ny folate B9, anjara lehibe ao amin'ny lalàna ny asidra amine manokana izay mitaky ny rafi-pitatitra.
Organic mainty tsaramaso fohy paty
672Prot / 161k kal
1344Prot / 321kcal
Fangaro: tsaramaso mainty voajanahary vovoka, voajanahary mainty vary vovoka, rano
organique gluten indray mipi-maso maimaim-poana soybean paty